Mety Ho Fanapahan-kevitra Mankany Amin’ny Fahafatesana Na Fiainana Ny Fandehanana Ao Amin’ny Oniversite ao Paragoay (Fizarana Faharoa) · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Andrea Chong Bras
Voadika ny 22 Marsa 2017 15:39 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, Español
Tamin'ny tolony mba hahazo hiditra eny amin'ny oniversite, sedra olana lehibe roa i Christian Quiñonez raha teny an-dalana nivoaka ny Chaco Paragoaiana. Sary Nicolás Sáenz, nahazoana alalana avy amin'ny tranonkala Kurtural.
Ity andian-tantara Cows That Fly, Schools That Crumble (Ombivavy Manidina, Sekoly Miharatsy), navoakan'ny tranonkalam-baovao ara-kolontsaina sy ara toe-karena Paragoayana Kurtural ity dia mitrandraka ny lesoka amin'ny rafi-pampianarana ao Paragoay. Ny fizarana farany, nosoratan'i Patricia Benítez, dia navoaka eto amin'ny Global Voices ao anatin'ny fizarana roa. Ny fizarana voalohany [mg] dia milaza ny antsipirian'ny toe-javatra mikasika ny fampianaram-panjakana sy ny tsy miankina ao Paragoay ary ny tranga ara-tantara ao Poerto Casado. Mitohy eto ambany eto ny faharoa.
Dimy taona lasa izay, tafavoaka velona tamin'ny lozam-piarakodia teny an-dalany ho any an-drenivohitra i Christian Quiñonez, izay nanao vivery ny ainy imbetsaka mba hianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Tamin'izany fotoana izany, nanohy ny fianarana hahazoana mari-pahaizana fitantanan-draharaha tao amin'ny Oniversite Mizakatenan'i Asuncion izy. Programam-pianarana ampitain-davitra izany, saingy notakiana taminy ny hanao fanadinana ifanatrehan-tava. Noho izany antony izany, tsy maintsy mandeha 600 km mahery any Asuncion i Christian isaky ny roa volana,. Tamin'ny iray tamin'ireo diany, nivadika ny kamiao nandehanany ary nivarina tao ankady amoron-dalana.
Araka ny tatitry ny polisy, vokatry ny faharatsian-dalana tafahoatra no anton'ny loza. Saingy nieren-doza i Christian, raha namoy ny ainy kosa i Marisela Ramírez sy ny mpamily, Freddy Fernández – zanaka lahin'i Justo Fernández, governoran'ny departemanta Alto Paragoay. Tafavoaka velona ihany koa ny mpandeha roa hafa: Fernando Fernández, zanakalahin’ ny governora sy Gleisy Ruiz, saingy naratra. Samy mpianatry ny oniversite daholo izy ireo.
Fandefasana sambo mankany Vallemí amin'ny toetr'andro tsara. Tsy voatery tsara foana ny andro. Sary avy amin'i Nicolás Sáenz, nalaina tao amin'ny tranonkala Kurtural, nahazoana alalana.
Miaritra ny mafy mba hianatra
Nanomboka nitotongana ny orinasa Carlos Casado SA tamin'ny taona 1980, rehefa tsy nahazoana tombombarotra intsony ny lotson-kodi-kazo (tanin), saingy tsy nikatona tanteraka izany raha tsy teo anelanelan'ny taona 1996 sy 2000. Tsy tsaroan'i Christian intsony ny amin'izany rehetra izany; tamin ‘ny fony izy mbola zaza, zara fa lehibe kokoa noho ny zananilahy Jonás.
Taorian'ny efa ho zato taonan’ ny fitrandrahana ny ala quebracho sy ny firohotry ny fiompiana omby, nandao ny firenena ny orinasa. Alohan'ny nanaovana izany, namidin-dry zareo ny tany efa ho 500.000 hekitara sy ny zavatra rehetra tao – ny rafitry ny orinasa taloha sy ny fitaovana, biby ary koa ny olona tao tany amin'ny orinasan'i Sun Myung Moon, ilay nilaza tena fa Mesia Koreana Tatsimo. Efa nodimandry i Moon, saingy tamin'ny taona 2000 izany, rehefa vita ny famarotana, nankany amin'ny Fiangonana Fampiraisan-tsaina, fantatra ihany koa ho sekta Moon izy. Noho izany, nomena teo am-pelatanan'ny tompony vaovao ny tany, ny tanàna, ny mponina ao aminy sy ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany.
Tamin'ny taona 2005, nanao dia an-tongotra 250 kilaometatra nankany Asunción ny ankamaroan'ny mponina tao Puerto Casado mba hitaky ny zo amin'ny tanin'izy ireo. Tamin'ny taona 2012, nambaran'ny Ivon-toerana misahana ny Fanajariana ny Tany sy ny Ambanivohitra fa “zanatany araka ny lalàna” i Casado rehefa nofoanana tamin'ny alalan'ny dingana ara-pitsarana sarotra ny ezaka hakana ny tany. Tamin'ny alalan'izany fanapahan-kevitra izany, tsy afaka noroahina tao amin'ny tany 35,000 hekitara intsony ny mponina, anisan'izany ny tanàndehibe. Na izany aza, mbola mitohy ny tolona mba haha ara-dalàna ny zon'izy ireo honina ao.
Nandritra ny Adin'i Chaco (1932-1935), raha niady i Paragoay sy Bolivia; i Puerto Casado no faritra fametrahana sy fakana fitaovana ho an'ny mpiady Paragoaiana izay nampiasa ny faritry ny orinasa sy ny fanamboarana fiaran-dalamby ihany koa. 80 taona mahery tatỳ aoriana, samy niala ity toerana ity i Christian sy i Éver Pereira mba hianatra. Luis Pereira ihany no nijanona tsy nianatra intsony. Hoy i Éver:
Naniry hatrany ny ho lasa miaramila izy. Nanosika azy aho mba hianatra izay misy. Saingy taorian'ny zava-nitranga, nialany daholo ny rehetra.
Na izany aza, samy tsy nisy niala an-daharana tamin'ity tolona ity i Éver sy Christian. Tsy amin'izao fotoana izao. Tsy ao anatin'ny dian’ izy ireo, hoy izy ireo, na koa aorian'ny fahafantarana ny fanonjan'ny renirano. Tsy safidy hafa mihitsy ny fifindràna monina any Vallemí, na angamba ao Concepción na faritra hafa mba hisorohana ny loza mety ateraky ny dia an-tsambo isan'andro. Natsahatry ny asany, ny fianakaviany, ny fifandraisany ary ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina izay manana olana hafa, tahaka ny tsy fisian'ny hopitaly sy lalana azo andehanana izy ireo. Hoy i Christian hoe:
Raha miala aho ary hianatra any an-kafa. Ho mora foana ho ahy ny mizatra izany tontolo izany ary tsy te hiverina ao Casado intsony aho. Ary raha tsy misy matihanina ao amin'ny fiarahamonina, tsy hisy oniversite mihitsy.
Tsy ny ho aviny manokana ihany no heveriny, fa ny ho avin-janany James sy Jonás ihany koa. “Mila mijery ny eto ny manampahefana ao an-drenivohitra. Noho ireo tranobe ireo, tsy afaka hahita mihitsy izy ireo fa tsy manana na inona na inona i Chaco. Manakana ny fahitan'izy ireo ireo tranobe ireo. Tokony handeha lavidavitra izy ireo ary hijery ny faritra eto aminay,” hoy izy.
Manondro ireo tranobe mamirapiratra mandrafitra ny tanànan'ny “foibe ara-toekarena vaovao ao Asunción» izy, araka ny iantsoana izany ao an-drenivohitra, izay mihamanaka-danitra ny trano goavambe noho ny firoboroboan'ny fandraharahana trano sy tany. Tontolo mirazotra izany ho an'i Christian, izay «miditra ao anaty fiara fitateram-bahoaka misy fitaovana famerana maripàna ianao ary mandeha am-pilaminana, manam-potoana handinihana ny antony mahatonga ny olon-kafa (manana) mitondra fiara mihitsy aza ianao», hoy izy miaraka amin'ny tsiky manohitra ny fahasarotam-piainana ao Chaco Paragoayana. Ao amin'ny tanàna onenany, mizara vanim-potoanan'ny orana sy vanim-potoana main-tany ny taona. Rehefa tsy maina sy vaky ny tany, dia fitokona-monina vokatry ny tsy fisian'ny lalana maharendrika anao izany.
Fito taona lasa izay, naharitra 36 ora, na angamba 48 ora ny fiaingana tao Asunción ho any Puerto Casado ao anatin'ny orana. Tsy maintsy nandeha fiara fitateram-bahoaka hatrao amin'ny seranan-tsambon'i Concepción, 400 kilaometatra mahery kely miala ao an-drenivohitra, ianao. Taty aoriana, tsy maintsy nandray ny Aquidabán, sambo izay miala ny seranantsambo isan-kerinandro ho any Vallemí. Ny lalana vaovao izay mampifandray an'i Concepción amin'i Vallemí dia ahafahan'ny olona mandray fiara fitateram-bahoaka isan'andro miala ao an-drenivohitra ary tonga amin'ny toerana aleha ao anatin'ny sivy ora, na mifamadika amin'izany. Christian, ohatra, mandeha isaky ny tokony mankany amin'ny dokoteran-jaza i James sy Jonas. Ka nandinika izy:
Tsiriritiko ny zavatra maro azo araraotin-dry zareo ampitan'ny renirano. Ho anay, tontolo hafa no misy.